ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई व्यक्तिगत रोजाइको डिजाइनमा डेबिट कार्ड सुविधा Bizshala -
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई व्यक्तिगत रोजाइको डिजाइनमा डेबिट कार्ड सुविधा
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई उनीहरुको आफ्नै छनौटको डिजाइनमा व्यक्तिगत फोटोसहितको डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउने सुविधा ल्याएको छ।
बैंकले ‘मेरो आफ्नै डेबिट कार्ड’ योजनाअन्तर्गत यो सुविधा ल्याएको हो। बैंक आफ्नै छनोटको डिजाइनमा व्यक्तिगत फोटोसहितको डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउने योजना ल्याउने नेपालकै पहिलो वित्तीय संस्था हो।
यस योजनाअन्तर्गतको डेबिट कार्ड प्राप्त गर्न ग्राहकले ग्लोबल आइएमई बैंकको वेबसाइटमार्फत अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्नेछ। कार्डप्रिन्ट गर्नुअघि ग्राहकले आफ्नो डिजाइन अनुसारको कार्डलाई भर्चुअल रुपमा हेर्न र आफूलाई मनपर्ने डिजाइन छनोट गर्न सक्नेछन्।
ग्राहकसँग वेबसाइटमा पूर्वडिजाइन गरिएका कार्डको विविधता छनौट गर्ने विभिन्न विकल्पसमेत उपलब्ध हुनेछन्।
आफ्ना ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले ‘मेरो आफ्नै डेबिट कार्ड’ योजना सार्वजनिक गरेको हो। यस्ता नवीनतम प्रविधिहरुको प्रयाग गर्दै बैंकले समयसापेक्षताअनुरुप ग्राहकलाई लावान्भित गर्दै आएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा बैंकको २८८ शाखा, २६२ एटीएम, २७५ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ५१ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी करिब ८७५ सेवा केन्द्रबाट २८ लाख भन्दा बढि ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङलगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप एक सातामै रु. ३४ अर्ब बढ्यो, सीडी
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप एक सातामै ३४ अर्ब रुपैयाँले...
बैंकहरुले असार मसान्तसम्म कायम गर्लान् त तोकिएको सीडी रेसियो
– रेखा चन्द काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको...
असार २७ बाट नबिल र एनबी बैंकको एकीकृत कारोबार
काठमाण्डौ । नबिल र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकको एकीकृत कारोबार असार...
बैंक खाता खोल्दै हुनुुहुुन्छ ? माछापुच्छ्रे बैंकमा छन्
– रेखा चन्द काठमाण्डौ । ग्राहकलाई मध्यनजर गर्दै बैंकहरुले...
नबिल बैंकका नवनियुक्त सीईओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाद्वारा
काठमाण्डौ । नबिल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...